भेटेकै हुन् त न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ? - बडिमालिका खबर
भेटेकै हुन् त न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ?
‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हुन् भने त्यो सामान्य विषय होइन । उनीहरुले न्यायालयबाट बिदा लिनु पर्छ’, एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘निष्पक्ष न्याय दिनु पर्ने श्रीमानहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन् भने त्यो क्षम्य विषय हुनै सक्तैनन् । त्यस्ता न्यायाधीशहरुबाट जनताले न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भनेर विश्वास गर्न सक्तैनन् । ती न्यायमूर्तिहरुलाई न्यायालयबाट बिदा गर्नै पर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काले २६ पुसको राति २०: ०० बजेबाट २१:१० बजेसम्म (राति ८ देखि ९ बजेर १० मिनेट सम्म) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ, । उनीहरुलाई ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर भेट गरेका उच्च स्रोतको भनाई छ ।
न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्कीलाई रातोपाटीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नु भएको हो ? प्रश्न गरेको थियो । न्यायाधीश कार्कीले ‘खै मलाई त थाहा छैन त्यस्तो कुरा’ भने । ‘संवैधानिक इजलासमा मेरो सहभागिताबारे प्रश्न उठेपछि मैले त्यहाँ बस्दिना भने । म आफ्नो सीमामा बसेको छु,’ कार्कीले बिहान साढे नौ बजे नै रातोपाटीसँग भनेका छन् ‘म गएको छैन । कसैलाई त्यसरी भेट्दा पनि भेट्दिन ।’
स्रोतको दावी के छ भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बालुवाटार गएकै हुन् । उनको गाडीमा एक जना कालो कोट लगाएकी महिला पनि थिइन् । ती को हुन् भनेर यकिन भएन । यद्यपि, न्यायाधीश कार्की तेहर्‍याएर भन्छन्, ‘म गएको छैन ।’
वरिष्ठता नं. २ र ३ मा रहेका न्यायाधीश कार्की र खड्कासँग भने रातोपाटीको कुराकानी हुन सकेन । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्रोतले कार्की, खड्का र प्रधानमन्त्रीबीच राति भेट भएको बताएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले बरियताक्रम मिचेर आफूहरुलाई संवैधानिक इजलासमा नराखेकोमा कार्की र खड्का रुष्ट छन् । ओलीले उनीहरुको त्यही मनोविज्ञान बुझेर आफूप्रति आकर्षित गर्न भेट गरेको स्रोतको भनाइ छ । बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा गएमा वरिष्ठताका आधारमा उनीहरु अवश्य नै त्यसमा रहन्छन् । त्यसका लागि ‘फकाउन’ पनि ओलीले उनीहरु बालुवाटार निम्त्याएका स्रोतको भनाइ छ । कार्की र खड्का नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हुन् भने त्यो सामान्य विषय होइन । उनीहरुले न्यायालयबाट बिदा लिनु पर्छ । ‘निष्पक्ष न्याय दिन पर्ने श्रीमानहरुले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन् भन्ने त्यो क्षम्य विषय हुनै सक्तैन,’ ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘त्यस्ता न्यायाधीशहरुबाट जनताले न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भनेर विश्वास गर्न सक्तैनन् । ति न्यायमूर्तिहरुलाई न्यायालयबाट बिदा गर्नै पर्छ ।’राताेपाटी डटकमबाट शाभार